Foshan Weierxin ကို Safe စက်ရုံ မှစ. Kung-Hei ဆီ Choi စေရန်လူတိုင်း | Weierxin Safe
ဆန္ဒလူတိုင်း 2022.Wish လူတိုင်းကောင်းသော health.Wish လူတိုင်း၌ကြီးစွာသောတစ်နှစ်ပိုပြီးငွေရှာ။
ဆန္ဒလူတိုင်းအားလုံးအကောင်းဆုံးကိုပိုပြီး money.Will လူတိုင်းဝင်ငွေ။
မည်သို့ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်ပေါ်မှာငါတို့လိုဂို print ထုတ်နိုင်ပါသလား?
A: 1. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားအကျိုးရှိစေရန်အတွက်အရည်အသွေးကောင်းပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ 2. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်တိုင်းဖောက်သည်ဆက်ဆံပါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့, သူတို့နှင့်အတူသူတို့ထံမှလာဘယ်မှာနေပါစေစီးပွားရေးနှင့်လုပ်မိတ်ဆွေများကိုလုပ်ပါ။
1.We အီး, ROSH, FCC သည်လွန်ပြီ။
3.Our စက်ရုံအဲဒီ ISO 9001 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လွန်ပြီ။
Foshan မှာယခုနှစ် 2004 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ငါတို့က Universal Technologies ကပေးဝေနေ, တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာကျော်ကြားတဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း, ထရေးဒင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု Fireproof Safe တစ်ဦးထက်သာလွန်အရည်အသွေးကိုစစ်ခင်းကျင်း၏ပေးစသည်တို့ကိုကြသူများထုတ်ကုန်တိကျစွာတန်းမြင့်ကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. set ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီထုတ်လုပ်နေကြ ပစ္စည်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းပညာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏တိကျသောလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီအမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်များတွင်ဤထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်။ စသည်တို့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Castor ဘီး, pallets, သေတ္တာ, ကျယ်ပြန့်မြင့်မားတဲ့ဆန့ခွန်အားစုံလင်သော finish ကို, ကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေး, ပွန်းပဲ့ခုခံနှင့်တာရှည်ခံ finish ကိုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တူ features တွေအဘို့တောင်းဆိုနေကြသည်။ အဆိုပါကမ်းလှမ်းခဲ့သည်စက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း, ကြာကြာဝန်ဆောင်မှုအသက်နှင့်တာရှည်ခံ finish ကိုစံချိန်စံညွှန်းများအဘို့လူသိများသည်နေစဉ်။